Thwebula Freegate 7.90 – Vessoft
WindowsInethiwekhiI-VPN & UmmeleliFreegate
Ikhasi elisemthethweni: Freegate
Freegate – software yokuwuthola block futhi belondekile uxhumano kwikhasi. Isofthiwe isebenzisa amanethiwekhi ezimele proxy amaseva, aqalaze kubo futhi ngokushesha uxhuma amaseva free. ukusesha Freegate ngoba amaseva proxy in an mode othomathikhi bese kwenza baguqule iseva ukuze kusheshiswe uxhumano. Isofthiwe uyakwazi ukuhlanza umlando website wavakashela kule iziphequluli ecacisiwe. Freegate has a esibonakalayo elula futhi enembile.
Dula amawebhusayithi Ukuvinjwa
uxhumano Automatic kuya etholakalayo proxy amaseva
Ukushintsha weseva uma kunesidingo
Isula umlando we wavakashela web-imithombo
Amazwana ku Freegate
Freegate software ehlobene
Isofthiwe ukusebenza nge ubuchwepheshe VPN. Isofthiwe ine amathuluzi ukudala i channel ngekhodi njengendlela iphuzu-to-phuzu noma iseva-to-amaklayenti.
Isofthiwe ukufinyelela website ivinjiwe futhi ukuvimbela imingcele internet. Futhi isofthiwe kwenza ukuvikela akhawunti yomsebenzisi bese amaphasiwedi ngokumelene Nokugenca.
Isethi free of network Izinsiza ukuthi kuhlanganiswe ibe software single. The amathuba ehlukahlukene control inethiwekhi ayatholakala umsebenzisi.